ဆိတ်မွေးဆံပင်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင် ၀ ယ်ယူရန် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းကင်း | WoopShop®
ဆိတ်ဆံပင် Round Blush Make Up Brush ကို
ဆိတ်ဆံပင် Round Blush Make Up Brush ကို backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Brush ပစ္စည်း - ဆိတ်မွေး
အဆိုပါကှကျ2ပတ်ကြာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဖြီးအရည်အသွေးကိုလုပ်, ပုံချောမွေ့ပျော့ပျောင်းသည်, စျေးကြီးကြည့်ရှုသည်။ အကြံပြု!
SPB အထိအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပါ၊ ၃ ပတ်အထိ Brush သည်အလွန်သာလွန်ပါသည်။ ယခုဤ blush ကိုကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုမှုတွင်အိပ်မောကျမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြီးအသစ်အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုငါထင်သည်။ အလွန်ပျော့ပျောင်းသောသာယာသော! ငါသည်ဤအမှတ်တံဆိပ်ကိုနှစ်သက်တယ်, ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စုတ်တံကိုယူ။ ငါအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်!
အဆိုပါဖြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါ! ပျော့ပျောင်းသည်။ ကောင်းစွာခေါ်ဆိုပါ၊ အရွယ်အစားသည်မျက်နှာမည်းခြင်းအတွက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းဆေးကြော - မျှဆံပင်ထွက်လာ၏။
ကောင်းသောဖြီး, ချောချောမွေ့မွေ့ပုံ။ လက်ကိုင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာမပျက်ရန်အတွက်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။
Кистьхорошая! Полностьюсогласнаспредыдущимиотзывами။ Продавцуспасибо!